ဟော်လန်အတွက်သောက် | Absolut ခရီးသွားခြင်း
maruuzen | | ဟော်လန်
ငါတို့ဟော်လန်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Heineken ဘီယာအကြောင်းငါတို့အားလုံးသဘောတူတယ် သိသာထင်ရှားတဲ့ကဒီမှာငါတို့သောက်သို့မဟုတ်သောက်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်မဟုတ်။ ဆိုလိုတာက Heineken ထက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘီယာထက်များတယ်။ ထိုအခါမူကား, ဟော်လန်တွင်အချိုရည်ကဘယ်လိုနေလဲ
7 Koffie Verkeerd
အခြေခံအားဖြင့်တော့၊ များစွာသောရိုးရာဒတ်ခ်ျအချိုရည်များတွင်အရက်ပါဝင်သည် တစ်ခါတစ်ရံအားလုံးသည်အလွန်သာယာသောအရသာရှိသည်သို့မဟုတ်ပြောဆိုမှုသည်ကြော့ရှင်းသည်။ တရားဝင်သောက်သုံးရေအသက်နှင့်စပ်လျဉ်း ဒီမှာမင်းကဘီယာ၊ နှင့်အသက် 18 နှစ်ကနေပိုမိုအားကောင်းအချိုရည်။
ရိုးရာသောက်စရာများတွင်ဘီယာ၊ ကော်ဖီ၊ လတ်ဆတ်သောလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်အခန်းငယ်၊ jenever liqueur နှင့်အခြားကျော်ကြားသောဒတ်ခ်ျအရက်များ၊ chocomel၊ ဘရန်ဒီ၊ kopstoot၊
ဒီမှာလူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုရှိပါတယ် Heineken နှင့် Amstel ဒေသခံများက“ pils” သို့မဟုတ်“ biertje” ဟုသာပြောခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုတောင်းဆိုသည်။ ဒါဟာဘီယာအကြောင်းပါ ဖြူဖွေးဖြူရော သူတို့အတော်လေးရေပန်းစားသည်, သို့သော်ဒတ်ခ်ျပျော်မွေ့ကြောင်းလည်းမှန်သည် ထိုကဲ့သို့သော bokbier သို့မဟုတ် witbier အဖြစ်ရိုးရာဘီယာ။
ပထမတစ်ခုမှာနွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီတွင်ပြုလုပ်သောအထူးဘီယာဖြစ်ပြီး၎င်းမှာအချိုအရသာရှိပြီးချိုမြိန်သည်။ ထိုအရသာသည်နှစ်ရာသီလုံးတွင်ကွဲပြားခြားနားပြီးဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးလှပသည်။ အရွက်ကျတဲ့အခါအမ်စတာဒမ်ကိုသွားရင် Bobkier ပွဲကိုတက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
အခြားဘီယာဖြစ်သော witbier ဘီယာတွင်အမွှေးနံ့သာရှိပြီးချိုမြိန်သော်လည်းအလွန်လတ်ဆတ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်၎င်းကိုဖန်ခွက်အောက်ခြေတွင်ကြိတ်ခွဲကာလတ်ဆတ်မှုနှင့်အချဉ်ဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးရန်သံပုရာရည်နှင့်အသုံးအဆောင်တစ်မျိုးဖြင့်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
လည်း ဘီယာပေါင်းပင်ရောနှောနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်s, "gruit" သည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကအသုံးပြုခဲ့ပြီး hops တည်ရှိခြင်းကိုမသိသောဘီယာကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီခဲ့သည်။ သငျသညျဥပမာ, Haarlem အတွက် Jopen တွင်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
အိုကေ၊ ဒီသောက်စရာကလေးမှာနာမည်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကတူညီစွာစားတယ်။ အေးသောနေ့ရက်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ရေးနာမည်တစ်ခုဖြစ်သော chocomel ကိုမေးလေ့ရှိသည် ပူပြင်းတဲ့ချောကလက် နှင့်နှစ်သိမ့်။
အချို့သောကော်ဖီဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များတွင် Chocomel အတွက်အရောင်းစက်များပင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုစူပါမားကတ်နှင့်စားသောက်ကုန်များတွင်ရောင်းချသည်။ ချောကလက်အမည်းရောင်၊ မုန့်သို့မဟုတ်အဆီများသောနို့များပါရှိသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆောင်ပုဒ်မှာ "de enige échte"၊ ပထမနှင့်တစ်ခုတည်းသော။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Tony Chocolonely နို့နယ်စပ်တစ်လျှောက်နဲ့အထူးသဖြင့်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်စတိုးဆိုင်များမှာသင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့နို့မှုန့်တွေရှိတယ်။
ဟော်လန်တွင် ၀ ိညာဉ်များစွာရှိပြီးအမ်စတာဒမ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Wynand Fockink အရက်။ နောက်နာမည်ကြီးအရက်ပါ T က Nieuwe Diep။ အမှန်တရားကတော့ ၁၇ ရာစုကတည်းကဟော်လန်နိုင်ငံမှာရေပန်းစားလာတယ်၊ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ရွှေခေတ်၊ အချမ်းသာဆုံးပဲတင်သွင်းတဲ့သကြား၊ နံ့သာမျိုး၊ သစ်သီးများနဲ့လုပ်ထားတဲ့အရက်များကိုတတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။
ထိုအချိန်တွင်အဆင်းရဲဆုံး၊ သာမန်လူများသည်ဘီယာ (သို့) ဂျင်ဗိုက်ကိုသာသောက်ခဲ့ကြသော်လည်းအရက်မတတ်နိုင်ကြပါ။ ထိုအချိန်မှစ။ အရက် သေးငယ်တဲ့ tulip-shaped မျက်မှန်အတွက်ဝတ်ပြုကြ၏ သူတို့ကအဆုံးအထိဖြည့်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒတ်ခ်ျကုန်သည်တွေကဖန်ခွက်ကိုသူတို့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ဖြည့်ထားတယ်လို့ပြောလို့ပါ။ ကျေးဇူးပြု, အရာအားလုံးရဲ့ထိပ်ရန်။
ရိုးရာဒတ်ခ်ျအရက်များကိုအဖျော်ယမကာသို့မဟုတ်သစ်သီးနှစ်မျိုးလုံးပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်ဗက်ဒ်ကာသို့မဟုတ်ဂျင်ဗိုက်ဖြစ်နိုင်သည့်ရေစက်အဖျော်ယမကာကိုပြုလုပ်သည်။ သကြားထပ်ထည့်သည်၊ အရောအနှောကိုအနည်းဆုံးတစ်လကြာလက်ထပ်ခွင့်ပြုသည်။ ရလဒ်မှာအရသာနှင့်ကြည်လင်သောအရသာရှိသောချိုသောအရည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောအရက်ပါဝင်သည်။
'duindoor' တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအရသာရှိသောအနံ့အရသာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြောက်ပင်လယ်၏သဲခုံများတွင်လိမ္မော်သီးနှင့်အတူအရသာရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ချယ်ရီသို့မဟုတ်သံပုရာနှင့်အတူအရက်ရှိပါတယ်, lemoncello အဖြစ်လူသိများအီတလီဂန္လိုပဲ။
အထက်မှာယမကာတွေအကြောင်းပြောရင် jenever အကြောင်းပြောကြတယ်၊ အင်္ဂလိပ်ဂျင်၏ဒတ်ခ်ျဗားရှင်း။ ၁၆၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်စပိန်နှင့်အင်္ဂလန်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲတွင်ဂျင်ဗင်ကိုဒတ်ခ်ျစစ်သားများကစားသုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသမိုင်းကဆိုသည်။ သူတို့သည်စစ်ပွဲမတိုင်မီသောက်သုံးခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်မဟာမိတ်များနှင့်အတူမျှဝေခဲ့ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်စစ်သားများသူတို့၏တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာသောအခါသူတို့နှစ်ခြင်းခံခဲ့သော“ Dutch Courage” အတွက်စာရွက်ကိုယူလာခဲ့သည်။ သူတို့ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူး၊ အရသာကလည်းအရင်ကမတူခဲ့ကြဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့က "သောက်ရလွယ်ကူစေဖို့" ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အချို့ကိုထည့်သွင်းလိုက်ကြသည်။
အိမ်ရှင်မ ၎င်းကိုဂျုံစေ့များဖြန်း။ ရနံ့သီးနှင့်အရသာရှိခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအရက်များထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်မျိုးစိတ်အချို့။ ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးကိုကောက်ပဲသီးနှံများတင်ပို့ရန်ရော့တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်နှင့်အမျှ Schiedam areaရိယာသည် Jenever distillery များဖြင့်လူကြိုက်များပြီးယနေ့တိုင်မြင်တွေ့ရဆဲဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ jenever ၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ: oude နှင့် jonge။ ခြားနားချက်သည်၎င်းတို့အားခွဲထုတ်ရန်ချန်ထားသည့်အချိန်၌မဟုတ်ဘဲသူတို့၏စာရွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Jenever Oude ကိုရှေးဟောင်းစာရွက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Jonge သည်ပုံစံအသစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပုံပြင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၊ အမ်စတာဒမ်ရှိ Bols အိမ်Schiedam မှာရှိတဲ့ Jenever ပြတိုက်၊
ငါတို့ကနည်းနည်းလောက်အရက်သောက်ပြီးလက်ဖက်ရည်သောက်ကြတယ်။ ဒါက လတ်ဆတ်သောပူစီနံလက်ဖက်ရည် အရာဟော်လန်အတွက်အလွန်ရိုးရာသည်နှင့်အမ်စတာဒမ်မဆိုထောင့်တွေအများကြီးယစ်မူးသည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောခွက်တွင်ရေပူနှင့်လက်ဖက်ရွက်သစ်လက်တဆုပ်စာဖြင့်ကျွေးသည်။
လက်ဖက်ရည်မှသည်ကော်ဖီအထိအဆင့်တစ်ဆင့်သာရှိသည်။ သင်ပေါင်းစပ်ကြိုက်လျှင် နို့နှင့်အတူကော်ဖီ ပြီးတော့ဒီဒတ်ချ်ကော်ဖီကမင်းအတွက်ပါ။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်caffè latte သို့မဟုတ်နို့နှင့်ကော်ဖီသို့မဟုတ်ကော်ဖီ၏ဒတ်ခ်ျဗားရှင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် espresso ဖြင့်ပြုလုပ်သောနို့ရည်ကော်ဖီကိုအခြေခံအားဖြင့်၎င်းကိုအမြှုပ်ဖြစ်စေရန် steamed milk ထည့်သွင်းထားသည်။ တစ် ဦး ကမွေ့လျော်။
အမည်, koffie verkeerd, ဆိုလိုသည် ကော်ဖီမှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာမန်ကော်ဖီမှာနို့တစ်စက်မရှိတာကြောင့်ပဲ။ ထုံးစံအရဒီဗားရှင်းကိုနံနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းမှာမှာယူရတယ်၊ ခါးသီးတဲ့သူတွေရှိပေမယ့်အခြားသူတွေကသကြားတစ်ဘူးထည့်ကြတယ်။ ကဖေးများ (သို့) အရက်ဆိုင်များတွင်ကွတ်ကီးနှင့်အတူသော်လည်းကောင်း၊ cookie ကို တစ် ဦး လိုက်ပါသွားအဖြစ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရက်ယမကာကိုပြန်သွားကြပါသည်။ ဒီသောက်ရာကနေလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ကြက်ဥ, သကြားနှင့်ဘရန်ဒီ။ အဆိုပါရလဒ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောရွှေသောက်ဖြစ်ပါတယ် အများအပြားကော့တေးနှင့်အချိုပွဲအောင်ဘို့အခြေစိုက်စခန်း။
ထောက်ခံအားပေးမှုဖြင့်ပြုလုပ်သောလူသိအများဆုံးကော့တေးတစ်ခုမှာ Snowball ဖြစ်သည်။ ဤတွင်တစ်ဝက်နှင့်တစ်ဝက်မှာလင်မနစ်နှင့်ရောစပ်ထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်္ဂလန်မှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပေမယ့်ဟော်လန်နိုင်ငံမှာတော့အများအားဖြင့်ကြာရှည်ခံသောမုန့်နှင့်ကိုကိုးအမှုန့်များဖြင့်တွဲသုံးလေ့ရှိသည်။
အဆိုပါစကားလုံး advocaat သည်ရှေ့နေကိုဆိုလိုသည်။ အချိုရည်နောက်ကွယ်မှဇာတ်လမ်းက advocaat (သို့) advocatenborrel သည်သူတို့၏လည်ချောင်းကိုမသန့်စင်မီလူအများရှေ့တွင်ပြောဆိုရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်။ လူသိရှင်ကြားဘယ်သူပြောတာလဲ ရှေ့နေများ။
ဤအချိုရည်ကိုပုံမှန်ဒတ်ခ်ျအရက်များစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်အားလုံး၊ စားသောက်ဆိုင်များသို့မဟုတ်ကဖေးများ၌ပင်ရရှိနိုင်သည်။ jenever နှင့်အတူရောထွေးခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချိုရည်ကိုကောက်ပဲသီးနှံများမှပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်အသီးသီးကိုသုံးသော jenever နှင့်မတူသည်မှာထိုအသီးများသည်ဤတွင်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်အရသာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, korenwijn ရိုးရာဒတ်ခ်ျအစားအစာနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဥပမာ၊ မြောက်အတ္တလန္တတိတ်ငါးသလောက်တစ်မျိုး (ငါးဟင်း) ။
၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဖန်ခွက်နှစ်ခုကိုဘီယာတစ်ခွက်နှင့်ဂျင်еверတစ်မျိုးကျွေးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဖျော်ယမကာတစ်မျိုးထဲ၌ဂျင်ဗင်ကိုသောက်သည်၊ ထို့နောက်ဘီယာသောက်ခြင်းသည်ပထမ၏မီးလောင်ခြင်းကိုငြိမ်းအေးစေသည်။
ပျော်စရာကောင်းပြီးပြင်းထန်ပြီးအလွန်ဒတ်ခ်ျတစ်ယောက်ဖြစ်လိုလျှင် 100% အမျိုးသားရေးအတွေ့အကြုံ။
၎င်းသည်လိမ္မော်ရောင်သောက်သုံးခြင်းထက်အခြားဘာမျှမရှိပါ အမျိုးသားရေးပွဲများအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ်King's Day သို့မဟုတ်ဘောလုံးပွဲများသို့မဟုတ် Liberation Day များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အဲဒါပါ အလွန်အားကောင်းတဲ့အရက်, အရက် 30% နှင့်အတူများသောအားဖြင့်တစ် ဦး အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် ပစ်ခတ်ခြင်း.
အဆိုပါ oranjebitter ခါးတယ်လိမ္မော်နှင့်လိမ္မော်ခွံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်လိမ္မော်ရောင်အရက်နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအရက်ထဲတွင်သကြားပါရှိသည်။ ယနေ့ Oranjbitter ပုလင်းအများစုတွင်သကြားရှိသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မရှိတော့ပါ ချစ်တယ် ခါးသီး။
၎င်းတွင်ပြင်သစ်နာမည်ရှိသော်လည်း၎င်းသောက်စရာသည်ဒတ်ခ်ျဖြစ်သည်။ ဒါဟာအရက်ပါ ဂန္၏ဒတ်ခ်ျဗားရှင်း ကော့ညက်. ၎င်းကိုပြင်သစ်အစ်ကိုနှင့်တခါတရံခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသော်လည်း ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ပြင်သစ်မူရင်းသည်မူရင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိခဲ့ပြီးထိုအမည်ကိုပြောင်းရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
လူကြိုက်များသောသောက်စရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုကိုကာကိုလာနှင့်ရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါ ၎င်းတွင်အရက်များစွာရှိပြီး ၃၅% ရှိသည်။ ပိုမိုအားကောင်းသည့်အရက်သည် Goldstrike ဖြစ်ပြီးအရက် ၅၀% ပါဝင်သည်။
ယခုအချိန်အထိအချို့ ဟော်လန်အတွက်အချိုရည် ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏နောက်ထပ်ရှိပါတယ်။ နယ်သာလန်သို့နောက်တစ်ခေါက်သွားလျှင်အသည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ။ ခံစားရန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဟော်လန်အတွက်သောက်စရာ
Absolut Viajes ကိုအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်၏အီးမေးလ်ဖြင့်ရယူပါ။